ऋचाको आत्महत्या झन् रहस्यमय बन्दै: प्रहरीले पत्ता लगायो यस्तो रहस्य ! – नेपाली सूर्य
ऋचाको आत्महत्या झन् रहस्यमय बन्दै: प्रहरीले पत्ता लगायो यस्तो रहस्य !
October 26, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on ऋचाको आत्महत्या झन् रहस्यमय बन्दै: प्रहरीले पत्ता लगायो यस्तो रहस्य !
काठमाडौँ – ५ दिन पहिले (आइतवार) आत्महत्या गरेकी भनिएकी झापा विर्तामोडकी २० वर्षीया ऋचा सेढाइँको मृत्युको कारण अझै सम्म पनि खुल्न नसकेपछि घटना रहस्यमय बन्दै गएको छ। उनि मृत अवस्थामा भेटिए पछी उनको हत्या हो या आत्महत्या भन्ने कुरा रहस्यमय बनेको भए पनि आत्महत्या नै हुन सक्ने केहि तथ्य भने फेला परेको बताईएको छ ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्दा उनले एक्कासी आत्महत्या नगरेको र यस भन्दा पहिले पनि पटक पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको खुल्न आएको छ । अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार ऋचाले यसअघि पनि ‌औषधि सेवन गरेर सुसाइड गर्न खोजेको पाईएको जनाए। उनका अनुसार करिव ४ महिना पहिले ऋचाले ट्वाइलेट सफा गर्ने विषादी समेत सेवन गरेकी रहेछिन्। त्यसवखत उनलाई परिवारले उपचारका लागि वोर्तामोड लागेका थिए। ऋचाका परिवार अनि उनको उपचारमा खटिएका चिकित्सकले उनले औषधि सेवन गरेको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन् ।
प्रहरी अनुसन्धानमा उनी अन्तरिक रुपमै पूर्ण फ्रस्टेड भएको तथा उनले अन्तिम पटक कोसँग सम्पर्क गरेकी थिइन् अनि के संवाद भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन प्रहरी लागि परेको छ। ऋचाको मोबाइलमा कल डीटेल भने डिलेट गरेको अवस्थामा भेटिएको थियो। अहिले उनको मोबाईलको कल डिटेल निकालेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ऋचा मोडलिङ क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै थिइन् र उनले आफ्नो भविष्य ग्याल्मर क्षेत्रमा बनाउने सोच बनाईसकेकी पनि थिइन् । उनले केही क्षेत्रीयस्तर सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएकी थिइन। उनको गत आइतवार दिउँसो करिब ३ बजेदेखि ४ बजेको भित्रमा मृत्यु भएको थियो।
रावणको एक गल्ती, जसले गर्दा स्थापित भयो शिवलिंग, पढ्नुहोस !
जस्तो सुकै घमण्डी केटीलाई पनि सजिलै पट्याउने सुत्रहरु.– जानी राखौ
January 2, 2018 January 2, 2018 Nepali Surya